Isihluku kuhlahlelwa ikhehla, isidumbu salahlwa emfuleni | isiZulu
Isihluku kuhlahlelwa ikhehla, isidumbu salahlwa emfuleni
Isihluku kudutshulwa owesimame phambi komndeni wakhe eMlazi
Uxabane nomkakhe wakhiphela isibhongo kosibali
Phumlani Gama. ILanga
Durban - Usababaza umphakathi waseZinkunini oBonjeni, enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal ngesihluku esisentshenziswe kubulawa ikhehla elineminyaka engama-66 ubudala, isidumbu salo esitholakale sintanta emanzini sinezimpawu zokuklajwa ngembazo nocelemba.
Isidumbu sikaSimon Thembitshe Stadium Mahlinza sitholakele ngoLwesine emfuleni obizwa ngeziNkunini.
Ngokusho komndeni wakhe, unyamalale ngesonto eledlule ngoMgqibelo engumuntu oyozidlela amanzi amponjwana njengoba vele bekuyinto abeyikhonzile.
Isidumbu sakhe sitholwe ngamalunga omphakathi abeyophuzisa izinkomo kulo mfula. Kuthiwa kubonakale ngamanzi ejike umbala, okukhomba ukuthi kunegazi eliqubukayo phakathi.
OLUNYE UDABA: Isihluku obenesikhwele enquma unina wengane
Amalunga omphakathi lawa asondele osebeni lomfula okuyilapho ebone khona izinyawo zomuntu kanti bese kuvele kwaziwa ukuthi kunyamalale umuntu omdala endaweni.
Ngokuthola kweLANGA, laba babikele omakhelwane abadlulisele umyalezo emaphoyiseni. Indlela okuthiwa uMnu Mahlinza ubeklajwe ngayo, ubebhekeki.
Elinye ilunga lomphakathi elibone lesi sigameko elicele ukuba lingadlulwa liveze ukuthi sekuvuka umkhuba omdala wokuhlahlelwa kwabantu endaweni bengonanga lutho.
"Le nto isibuyisela emuva lapho khona bekuyaye kusuke izigilamkhuba zihlalele abantu endleleni zifike zibabuze ukuthi kungani behamba ebusuku. Ingakaphumi impendulo kushe ucelemba.
"Besiye sizitshele ukuthi ngamasela afuna ukuthi sisheshe singene ezindlini emuva kwalokho angene ezibayeni aqoqe imfuyo yethu ahambe ngokukhululeka emgwaqweni.
"Okwenzeke kubaba uMahlinza kunobusathane phakathi. Noma ngabe kukhona abexabene naye, bekungafanele amhlahlele ngembazo, ikhanda liphelile lihlukaniswe izinqamu. Izandla zihlahlelwe nazo okukhomba ukuthi ubevika ngazo. Sikhalisana nomndeni kamufi ngokuwehlele ngoba uMahlinza bekuyikhehla elihlala ngokuziphuzela utshwala lingenazitha.
"Kumanje siyesaba ukuthi singahamba ebusuku ngoba ababulali bakhona lapha endaweni nakuba singabazi. Bekungeke kusuke abanye abantu kwezinye izindawo bazogila umkhuba khona lapha. Sicela iziphathimandla zethu ukuba zilubhekisise kabanzi lolu daba," kusho leli lunga lomphakathi.
Inkosikazi kamufi, u-Agnes Mahlinza, ithe kuyihlukumezile ukubulawa kwendoda yayo ngalolu hlobo ngoba ngokwazi kwayo uMahlinza ubengenazitha ezingaze zimlalele endleleni, zimhlahlele ngembazo.
"Ngokujwayelekile ubaba uyaye ayoziphuzela njengamanye amadoda, ntambama uyabuya. Siqale ukusola ngeSonto ntambama sizitshela ukuthi ulale kwamfowabo omncane.
"Sidumele sesithintwa ukuthi masiyobona isidumbu sisemanzini. Ubengabhekeki ngendlela ahlahlelwe ngayo, ubungathi bebebukisa ababulali.
"Okuyinkinga enkulu kakhulu, kumanje kasinalutho lokumngcwaba njengoba isomiso sihlasele sahamba nakho konke obekukhona.
"Sicela noma ngubani ongaba nosizo ukuba asondele asilekelele ngezindleko zomngcwabo ngoba kumanje kasikwazi ngisho nokukhipha usuku lomngcwabo. Ngihlukumezeke kakhulu ngokubulawa kwendoda yami ngalolu hlobo," kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCaptain Thembeka Mbhele, uthe kuvulwe icala lokufa komuntu esiteshini samaphoyisa aseJozini.
Uthe kutholakale isidumbu sowesilisa sintanta emanzini sinezimpawu zokuklajwa ngembazo maqede sadluliselwa kodokotela abazokhipha umphumela mayelana nokufa kwakhe.
Uthe kakukaboshwa muntu amaphoyisa asaphenya.